DEG DEG: Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska oo dacwad ku soo oogay Sergio Aguero – Gool FM
DEG DEG: Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska oo dacwad ku soo oogay Sergio Aguero
(Manchester) 30 Agoosto 2016 – Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee FA ayaa dacwad ku soo oogay weeraryahanka Manchester City ee Sergio Aguero rabashadii dhaqan xumada ahayd ee uu ku kacay, kaddib markii uu xusul laqsiiyey difaaca kooxda West Ham ee Winston Reid.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa hadda wajihi kara ganaax, kaasoo meesha ka saaraya inuu ciyaaro kulanka kooxdiisa ku soo aaddan ee Manchester Derby 10 bisha September ee soo socota.
Dhaliyaha kooxda Manchester City ayay FA-gu dacwad ku soo oogeen kaddib markii uu xusul ku dhuftay Winston Reid kulankii Axaddii ay 3-1 ku adkaatay kooxdiisa Sky Blue, waxaana uu haystaa inuu arrintan jawaab kaga bixiyo ilaa maqribnimada berri oo Arbaco ah.
“Sergio Aguero waxaa lagu soo eedeeyay fal dhaqan xumo ah oo aysan arin saraakiisha kulanku, balse waxaa qabtay muuqaalka, gool dhaliyaha Manchester City waxa uu ku lug lahaa dhacdada daqiiqaddii 76-aad ee kulankii Axadii ee 28 August 2016, kaasoo dhex martay isaga iyo Winston Reid oo ka tirsan West Ham United, wuxuu haystaa inuu uga jawaab celiyo ilaa 6pm Arbacada 31 Agoosto.” ayey u qorneed bayaan ka soo baxay xiriirka FA-ga.
Waxaana xiriirka kubadda cagta Ingiriisku ay intaa ku dareen: “Shilal noocaas ah oo aysan inta ciyaarta lagu jiro arkin guddiga garsoorka, waxaa loo sameeyaa guddi dabalgal oo soo dhiraandhiya, waxaana guddigaas mid waliba oo ka mid ah uu dib u daawanayaa muuqaalkii laga duubay falkaas si xor ah, iyagoo markaas kaddibna go’aan ka gaari doona arrintaas.”
Waxaa la filayaa in haddii dacwaddaan lagu helo Aguero in la ganaaxo saddex kulan, haddii uu ganaaxaas ku dhaco waxa uu yeeraryahankan ka maqnaan doonaa kooxdiisa kulamadda ku soo aaddan oo ay la kala ciyaari doonto Manchester United, Bournemouth iyo Swansea City.
HAMBALYO: Kooxda Bariga Dhexe oo ku guuleysatay horyaalka heerka labaad ee Soomaaliya
RASMI: Kooxda Inter Milan oo ku dhawaaqday saxiixa Gabriel Barbosa, kaasoo ay maanta ku beegan tahay dhalashadiisa